पेट दुखाईका कारण अस्पताल पुगेकी महिला पुरुष भएको थाहा पाएपछी…
✍ बिप्लब पोख्रेल4weeks ago
काठमाण्डौ । भारतको पश्चिम बंगालको वीरभूम जिल्लाकी एक ३० वर्षीया विवाहित महिलाले पेटको तल्लो भाग दुखेर अस्पातल गइन । अस्पतालको अनुसन्धानबाट एक आश्चर्यजनक कुरा पत्ता लाग्यो । परीक्षण पछि, डाक्टरहरूले उनी वास्तवमै ‘पुरुष’ भएको र उनको अण्डकोषमा क्यान्सर भएको पत्ता लाग्यो।
महिलाको विगत नौ बर्षदेखि विवाह भएको छ र केही महिना अघि पेटको दुखाइ गुनासो गरी शहरको नेताजी सुभाषचन्द्र बोस अस्पताल गएको थियो। डा. अनुपम दत्त र डा. सौमान दासले यसको परीक्षण गरे। जसले महिला वास्तवमा एक पुरुष हो भन्ने तथ्यलाई प्रकट गर्‍यो।
समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार डा. अनुपम दत्ताले भने, ‘उनलाई देख्दा महिला जस्तै देखिन्छ । आवाज, स्तन, सामान्य जननेंद्रिया, आदि सबै महिलाको स्वामित्वमा छन्। यद्यपि, उनको शरीरको गर्भाशय र अण्डकोश जन्मदेखि नै छ। उनको कहिले पनि पिरियड भएको छैन।
डा. अनुपम दत्ताले भने कि यो दुर्लभ अवस्था हो र सामान्यतया २२,००० मध्ये एक जनामा ​​पाइन्छ । आश्क्चर्य लाग्दो कुरा के छ भने उक्त महिलाको २८ वर्षीया बहिनीको अनुसन्धानमा उही स्थिति आएको छ, जसमा व्यक्ति आनुवंशिक रूपमा पुरुष छ तर उसको शरीरका सबै बाह्य अंगहरू महिला छन्।
डाक्टरले भने कि बिरामीका अन्य दुई आफन्तहरू पनि विगतमा यस्तै समस्या भएका छन्, त्यसैले यो जीन-सम्बन्धित समस्या देखिन्छ। उनले भने कि उक्त महिला केमोथेरापीमा छिन् र उनको अवस्था स्थिर छ।
उनले भने, ‘उनी एक महिलाजस्तै हुर्केकी छिन् र एक पुरुषको साथ झन्डै एक दशकसम्म विवाहित जीवन बिताइरहेकी छिन्। यस समयमा हामी बिरामी र उनको पतिलाई परामर्श गर्दैछौं र उनीहरूलाई विश्वस्त पार्न कोशिस गर्दैछौं कि उनीहरूले अहिलेसम्म बिताए जस्तो गरी जीवन बिताउने छन।
छोराको विवाह गर्न पुगेका बुवा सम्धीनी लिएर फरार, पछि गाउँलेले वास्तविकता बताएपछि सबैजना आश्चर्यचकित ! ✍ बिप्लब पोख्रेल
कर्मचारीको सानो गल्तीका कारण करोडपति बनेपछी… ✍ बिप्लब पोख्रेल
आखिर किन प्रत्येक तीन बर्षमा चिहानबाट शवहरू निकाल्छन ? ✍ बिप्लब पोख्रेल